Nin Soomaali ah oo hal habeen laba haween ah la aqal galay (DAAWO VIDEO) – SBC
Nin Soomaali ah oo hal habeen laba haween ah la aqal galay (DAAWO VIDEO)
Posted by editor on December 26, 2011 Comments
Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdinaasir Mahdi Barqad ayaa ku dhaqaaqay talaabo hadal hadal iyo soo jiidasho ku reebtey dad fara badan ka dib markii uu hal habeen la aqal galay laba haween ah isagoo isku mar mehriyey ka dibna la aqalgalay.
Labada haweenka ah ayaa lagu kala magacaaba Sabaad Axmed Muuse iyo Malyuun Aadan iyadoo arooskooda ay la wadaagaan Cabdinaasir uu ka dhacay tuulo ka tirsan degmada Boorame ee gobolka Awdal.
Cabdinaasir oo la waydiiyey sida arintan ay ugu suurtagashay isla markaana uu labada haweenka ah ugu qanciyey in hal habeen uu la aqal galo ayuu klu sheegay in arintaasi ay ku timid “Jaceyl” mudo laba sano ah soo jiitamayey oo uu labada hablood uu la wadaagay, isagoo sheegay in hanta badan aanu haysan balse arinkaasi uu u sameeyey geesino.
Sabaad & Malyuun oo la wareysatey ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin go’aanka ay kula aqalgaleen hal habeen Cabdinaasir waxaana ay sheegeen in ay raali isaga yihiin arooskan.
Cabdinaasir, Malyuun & Sabaad ayaa dhamaantood da’doodu ka badneyn 30 sano waxaana guurkoodu uu noqonayaa mid ka mid ah guurka taarikhda gala.
Hadaba si aad u daawato arooskan la yaabka leh ee aqal Soomaaliga isku aroosay, raalina la isaga yahay iyo waliba dareenka lamaanaha iscalmay oo aad ka dareemayso farxad iyo dhoolo cadeyn, riix link-ga video-ga hoose.Halkan ka daawo
maashaa allaah gabadho cajiibah waaye inay ogolaadeen ianay qaybsadaan ninkooda waab qiso aan somaliya laga aqoonjirin. Laakiin waxaan layaabanahay sidee xaqeeda usiinayaa halka habeen ileen midkasta xaq waxay uleedahay inay laciyaarto odaygeeda cusub 7 maalmoode midakale ma masayrayso miyaa marakay aragto midakale asgoola jimicsanaaya walaahy gabdho fariido ah iga dheh maashaa allh sunihii bay soo ceeliyeen alle hau fududeeyo gabdhah kale iany ku daydaan kolay anigu mayeeleen waan masayrilahaa marak allow diintena nagu sug aamiin
c/fitaax osman maxamuud says:
man sha alaah ilaahay waxaan karajaynay naah haday jirto arin taas in alle ka dhigo ninkii qaqoodagotah oo aan noqon seda raga qaarkees oo ah orge ku daayah bas masuuliyad nah aysan saarnay ilaah halagarab galo aamiin waa qiso layaableh
muse w/w says:
a/c waa arin wanaagsan kuna cusub geyigeena waa arin aan ku talajirey qudhayduu lakiin sxbkay ayaa iiga horeyey iyo labadiisa oori waxan leeyahay ilaahay haka dhigo kuwo isku waara ubadna kala hela aamin
aad baan u soo dhawaynayaa arintaa laaakiin ma dhabaa mise waa tska qor
maxamad gentelman says:
………waaaaaaaaaaaaw aa layaab , laakiin haddaay dhacdayba sxb waan kkugu hambalyaynayaa sxb waxaana ku leyahay mabruuk , waa inaad qancisaa midna ha u badan waa iga talo ok sxb ……………